UPHONONONGO: 'UMDANISO KUNYE NEEDRAGONS' KAGEORGE RR MARTIN AMANQAKU ESIHLANU KUTHOTHO LWENGOMA YOMKHENKCE KUNYE NOMLILO-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
Uphononongo: 'Umdaniso ngeDragons' kaGeorge R.R. Martin inqaku lesihlanu kuthotho lweNgoma yomkhenkce kunye noMlilo
Ngokufika koMdaniso ngeDragons, Incwadi yesi-5 eGeorge R.R. Martin yokuvusa iNgoma yoMkhenkce kunye nomjikelo woMlilo, lixesha lokuba siqhube isibonda entliziyweni ka-J.R.R. Tolkien kunye neNkosi yeRings. Njengabanduleli bayo Umdaniso unesabelo sawo seeflagons 'n' dragons, kunye namakrele 'n' abathakathi, kodwa oko akwenzi uMartin i-American Tolkien, njengoko abanye babeya kuba nayo. Ungcono kakhulu kunoko.
Uthotho lwe-semiprecious, olwaqala ngoMdlalo weTrone ngo-1996, lufana nenoveli emnandi yenkulungwane ye-19, kodwa ngaphezulu kweBalzac kunye noDickens kunoTolkien. UMartin ubhalela abantu abadala, ngobuthuntu nobumdaka bomhlaba obufanela unyana kaBayonne, N.J., indoda ende elunxwemeni. Umntu wakhe kwiphepha-kwiphepha lelomntu we-pint-and-a-shot ovele ekwazi okuninzi malunga nokunyamekelwa kunye nokutya kweedragons. Nabani na oye walandela umsebenzi wakhe kwi-HBO, apho isizini yokuqala yoMdlalo weTrone isanda kuphela, uyazi ukuba, naye.
Uthotho lweTV, oluye lwahlaziywa isizini yesibini, lwakhulisa abaphulaphuli bakaMartin ngaphaya kwabalandeli bentelekelelo, kwaye lwavuselela umdla omkhulu kunesiqhelo wencwadi yesihlanu kumjikelo. Iikopi ezimalunga nama-650 000 sele zishicilelwe.
Ubusika buseza kuMdaniso kunye neeDragons, njengoko kuthenjisiwe kwiiTrone zobukhosi, kunye nekamva lelizwekazi lasentsomini laseWesteros kunye noBukumkani balo obuSixhenxe zisaza kubanjwa, njengoko bunjalo ubomi bamagorha kunye namaqhawe amaninzi kunye namaqhawekazi (kunye nabo bahexayo. phakathi, belindele ukuguqula iingubo zabo nokuba yeyiphi na indlela umoya woloyiso onokubhula ngayo).
Iziqalelo zentelekelelo zikhona apha kodwa zithuliswe ngobuchule, njenge. UMartin uchasene nemigaqo yodidi. Uhlala enomdla ngakumbi kukungqubuzana phakathi kweenkolo eziphikisanayo, ngeKremlinology yaseWesteros, kwizicwangciso, iiplani, ukuhleba, ubuxoki, iimfihlo ngaphakathi kweemfihlo ezenza umdlalo weetrone. Ngalo lonke eli xesha ubukhosi bakhe bamaxesha aphakathi buyi-echoes kunye ne-echoes yexesha lethu, yezothuso zethu zanamhlanje ezigquma amaxoki, iintlola kunye namakholwa okwenyaniso.
Okubaluleke kakhulu kubalandeli, uMdaniso onamaDragons ubamba abanye abalinganiswa abadumileyo bakaMartin, kuquka uDaenerys Targaryen, ukumkanikazi wesixeko saseMeereen kunye nomama weedragons ezintathu; UJon Snow, umphathi we-998th wenkosi ye-Night's Watch; UArya Stark, intombi eneminyaka eli-11 ubudala yeNkosi Eddard Stark ongasekhoyo waseWinterfell; kunye noKumkanikazi ohlazekileyo uCersei weNdlu uLannister.
Okona kulungileyo kuko konke, iiDragons zisibuyisela umva kwinkampani kaTyrion Lannister, umncinci kodwa oqaqambileyo ohlekisayo, i-swagger kunye nobuntu bakhe obucacileyo bumenza abe yinkwenkwezi (ehlala enxilile) kolu thotho.
UMartin yidervish yoncwadi, echukunyiswa ngabalinganiswa abantsokothileyo kunye nolwimi olucacileyo, kwaye ephuphuma ngumbono wasendle wabona babali bahle kakhulu. Kwaye iTyrion yeyona ndalo yakhe ibalaseleyo. Umbulali ozalanayo kunye nombaleki, uTyrion uthatha iindima ezininzi kwiiDragons: mummer, ijoni, umgcini wentlawulo, ikhoboka, impuku yomlambo kunye nomthinjwa. Ukwi-joke ye-cosmic yokuba ngumntwana ozelwe kakhulu kwaye uyakhawuleza ukunika u-Westeros ubulumko obusebenzayo: Musa ukuthemba mntu. Kwaye ugcine inamba yakho ikufutshane. Ukwaphawula ukuba indoda encinci enekhaka elikhulu iya kubaphambanisa abatoli.
Ukuqwalaselwa okulolo hlobo kugcina abafundi bakaMartin bedloba kwaye bahlukanise Ingoma yoMkhenkce kunye noMlilo kwezinye iinoveli zodidi.
Abafundi abanqwenela ukuba uMartin abophe ubuncinci iziphelo ezimbalwa kwiyelenqe lakhe elineentente ezininzi baya kudana, nangona ikamva labalinganiswa licacisiwe. Iidragons zikaDaenerys ziyakhula, kwaye kunjalo nobudlelwane bakhe nabo. UCersei ufunda ukuba ukuthobeka kokwenyani kunye nokuzisola akuzi lula. Kwaye uTyrion uyaqhubeka, umdlali ongalindelekanga kwikamva leWesteros. Nangona kunjalo, uMdaniso kunye neeDragons, ngenxa yentabalala yayo yokuzonwabisa, ngakumbi malunga noMartin edibanisa imikhosi yakhe ngolindelo lweencwadi ezimbini zokugqibela zomjikelo.
Sekunjalo, kukho ulonwabo olufumaneka kumagama anxilileyo athiywa iindawo (i-Frostfangs, i-Sea Dragon Point, i-Rook's Rest) kunye nabantu (abangenakhaya uHarry Strickland kunye ne-Bloodbeard, uCotter Pyke kunye ne-Three-Finger Hobb, Wick Whittlestick kunye nePinchface Jon Myre) .
Kwaye uburharha bakhe beBayonne bukwabeka uMartin ahluke. Naphakathi kwegazi, amathumbu kunye ne-mead, uTyrion uphawula ukuba izixhobo zakhe azithandayo ziquka izembe, ikrele, inqaku elikhethiweyo. Okanye njengoko uAsha Greyjoy, ukapteni olibhinqa wenqanawa iBlack Wind, ephawula: Amanye amadoda ayenobuso obukhalela iindevu. Ubuso bukaSer Clayton bakhalela izembe phakathi kwamehlo.
Intloko enkulu kunye noMdaniso kunye neeDragons kukuba yisitolimende sephepha le-1,016 kwinoveli enkulu ukuba ukuza kuthi ga ngoku iphelele ngamagama ayi-1,742,848. Kumsebenzi wobu bukhulu, ngumfundi ekufuneka aqalise iphulo elinzima, kwaye isishwankathelo esingaphambili siya kuba luncedo.
Nakwabo bawufunde wonke umjikelo kwaye babukele uthotho lwe-HBO, kuninzi kakhulu okuye kwahamba ngaphambili ukuyigcina ilungile. Iminyaka emithandathu yahlula upapasho lweDragons kunye neNcwadi yesi-4, uMthendeleko wamaCwaba; Iitrone zaphuma xa uDerek Jeter wayeyi-rookie.
Kuyo yonke loo nto, uMdaniso ngeDragons udibana nemigangatho ephezulu esekwe ngabantakwayo abane. Kwaye njengazo zonke iiseries ezifanelekileyo, ayiniki umfundi ukuphefumla ngokweemvakalelo, ephela ngamanqaku emibuzo abukhali encakuba njengoko amavili anzima exesha elizayo encwina eshukuma, kunye nokubulala nokubulala kunyuka.
Njengoko i-Dragons isiya esiphelweni sayo, umfundi ubethwa yi-cliffhanger emva kwe-cliffhanger, ngelixa esazi kakuhle ukuba isavenge sikaMartin esilandelayo asizukuphuma kwiveki ezayo, okanye kunyaka olandelayo. Kodwa njengoko ndibhala, ndiyazi ukuba ndiya konwaba ukubambelela kumqolo onzima kunye ne-scaly wale inamba yomdaniso njengoko ndilinde iNcwadi yesi-6, Imimoya yaseBusika.
Ngoko, ewe, ubusika buseza. UTolkien ufile. Kwaye uphile ixesha elide uGeorge Martin.
Bantam Books, 1,016 pp., $35.
UGeorge R.R. Martin
Inikelwe ziincwadi zikaKepler
Xa: 7pm uLwesithathu
Indawo: Ithiyetha yeFox, 2223 Broadway, eRedwood City
Ukwamkelwa: I-$ 42 ivuma umntu omnye kwaye iquka ikopi enye ye-A Dance With Dragons; I-$ 48 ivuma abantu ababini kwaye iquka ikopi enye yencwadi; 650-324-4321, www.keplers.com